मलेसियाको रोजगारी रोकिए नेपालको श्रम बजारमा कस्तो असर ? - jagritikhabar.com
मलेसियाको रोजगारी रोकिए नेपालको श्रम बजारमा कस्तो असर ?
नेपाली कामदारका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य देश हो मलेसिया। तर, पछिल्लो ८ महिनादेखि नेपाली कामदारहरुका लागि मलेसिया जाने ढोका बन्द छ। पटक–पटक भएका द्विपक्षीय छलफलका बा’वजुद पनि मलेसियामा नेपाली
कामदार आपूर्ति कहिलेदेखि सुचारु हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् नै छ। ‘मलेसियाको श्रम बजार कहिले खुल्छ?’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टमाथि केही महिनायता थुरिने प्रश्न हो यो। जवाफमा उनले ‘छलफल जारी छ, छिट्टै खुल्छ’ भनेर थुमथुम्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।
दुई देशबीच श्रम सम्झौता भए पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्ने विषय कहाँ अड्किएको छ त?
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्या’उन नयाँ कानुन र संरचना निर्माण गरिरहेकाले मलेसियामा तत्काल कामदार आपू’र्ति गर्ने अवस्था छैन। तर आफूहरुले सम्बन्धित निकायसँग बारम्बार रोजगारी खुलाउने विषयमा छलफल गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयक सचिव महेशप्रसाद दाहाल दा’बी गर्छन्।
श्रमिकसँग जोडिएका विषय भएकाले दुवै देशले सम्झौताका विषयमा पछिसम्म पनि कू’टनीतिक समस्या नहोस् भनेर अध्ययन भइरहेको बताउँदै सचिव दाहालले भने, ‘रोजगारीसँग कामदारको स्वास्थ्य, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन/मापदण्ड लगायतका विषयलाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्छ।
श्रम सम्झौतामा यस्ता विषय समेटिएका भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको छ।’ नेपालबाट वार्षिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर करिब १ लाख २० हजार कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। यदि अहिलेको जस्तै अवस्था रहेमा सरकारले वार्षिक १ लाख २० हजार कामदारलाई अन्य देश पठाउन वातावरण बनाउनुपर्छ।
कि त नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसमाथि बर्सेनि आन्तरिक श्रम बजारमा सयौंको संख्यामा कामदारहरु थसिने क्रमसमेत बढ्दो छ। मलेसियाली श्रम बजारमा नेपाली कामदार आपू’र्ति बन्द भयो भने नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगारीको समस्या थप विक’राल बन्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ भारतको बाटो हुँदै नेपाली युवा मलेसिया तस्क’री हुने सम्भावना पनि रहन्छ।
देशभित्रै रोजगारी’मैत्री वातावारण सिर्जना नभएसम्म देशको विकल्प खोज्ने बाहेक सरकारसँग अन्य सुविधा नभएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास प’ण्डित बताँउछन्। ‘सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै युवालाई तत्काल सामान्य रोजगारीसम्म पनि दिन सक्ने अवस्था छैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘जसका कारण मलेसियाको रोजगारी बन्द भइरहे नेपालको श्रम बजारमा ठूलो झ’ड्का लाग्न सक्छ। यो विषयमा सरकारले मनन गर्नुपर्छ।’
मलेसियाको रोजगार लामो समय बन्द गर्नु नेपाल सरकारका लागि नै दु’र्भाग्यपूर्ण भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाको मत छ। रोजगारदाता देशले एउटै देशको श्रमिकको बाटो लामो समय कुर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। यदि मलेसियाको रोजगारी समयमै खोल्नतर्फ श्रम मन्त्रालय गम्भी’र नबन्ने हो भने देशभित्र रोजगारीका नाममा भया’नक अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
सरकारले हालसम्म मलेसिया जाने कामदार व्यवस्थापनका खातिर अन्य देश पठाउन र देशभित्रै रोजगारी दिलाउन आवश्यक वातावरणका लागि केही ठोस योजना बनाएको देखिँदैन। मलेसियाको रोजगारी अहिले कै जस्तो अवस्थामा रहिरहे युवाहरुलाई कामको खोजीमा भौँता’रिने अवस्था आउन सक्छ।